हनिफ मियाँ जसलार्इ दशैँ आफ्नै लाग्छ - समाज - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
वासुदेव मिश्र पोखरा असोज ३१
भद्रकाली मन्दिरको फेदमा रहेको यो बस्ती नाम अनुसारै मुस्लिम बस्ती हो। वरपर हिन्दू ब्राम्हण र गुरुङ बस्ती छन्। अलि मियाँ यहीँ जन्मिए, हर्किए।
बाल्यकालदेखि किशोरावस्थासम्म उनका सपना यहीँ झाँगिए। लोककवि उपमा पाउनुअघि उनी मुस्लमि समुदायले गर्ने व्यापार गर्थे। पोते काइँयो बेच्दै लोकगीत सुनाउँदै हिँड्थे। हिन्दूका चाडबाडमा भजन र रामायण सुनाउथे। उनी बितेको ठ्याक्कै १२ वर्ष पूरा भएको छ। तर हिन्दू संस्कृतिमा राम्रोसँग घुलमिल भएका अलिमियाँलार्इ छिमेकीले बिर्सिएका छैनन्। हिन्दू छिमेकी र संस्कृतिसँग उनले कसेको मेलमिलापको गाँठो अहिले पनि उस्तै छ।
'यस्तो किन पनि भएको हो भने उहाँ छिमेकीले मनाउने सबै चाडबाडमा सरिक हुनुहुन्थ्यो', छोरा अनिफ मियाँ भन्छन्, ‘छिमेकीहरु बुबालाई घरमा हुने श्राद्धमा पनि निम्त्याउँथे। बुवा हिन्दुहरुको चाड उनीहरुले जस्तै मनाउनुहुन्थ्यो।’
सानो छँदा दशैँमा नयाँ लुगा लगाएको सम्झना हनिफसँग ताजै छ। ‘हरेक दशैँमा बुबाले नयाँ लुगा ल्याइदिनुहुन्थ्यो। घरमा च्याङ्ग्रा काटिन्थ्यो, सेलरोटी र झिलिङ्गा पाक्थ्यो।’ सामान बेच्न बाहिर गएका बुबा घर फर्किएपछि दशैँ लागेको अनूभूति हनिफलार्इ दशैँ लागेको अनुभूत हुन्थ्यो। दशैँमा टीका लगाउने कार्यक्रम हुन्थ्यो। दक्षिणा पनि दिइन्थ्यो। ‘टीका लगाएपछि बुबा दशैँमा पिङ खेल्दै, दोहोरी गाउँदै ठाउँठाउँ पुग्नुहुन्थ्यो’, उनले सुनाए।
अहिले हनिफ पनि दशैँ मनाउँछन्। ‘पहिलाभन्दा दशैँ मनाउने शैलीमा केही परिवर्तन भएजस्तो लाग्छ’, उनले नेपालखबरसँग सुनाए,‘हामी पनि अरूहरूलेजस्तै मज्जाले दशैँ मनाउँछौँ।’ मियाँपाटनस्थित निवासमा दशैँ आउनु अगाडि लिपपोत सुरू हुन्छ। घर सफा गर्नेदेखि दशैँलार्इ खानेकुरा जुटाउने चटारो उस्तै हो।
'म पनि टीका लगाएर दक्षिणा बाँड्छु। फरक यति हो मलार्इ अन्य कार्यक्रममा जस्तै दशैँमा पनि रातो टीका नै मनपर्छ', उनी भन्छन्।
पिताको सम्झनामा अली मिया लोक वाङ्गमय प्रतिष्ठान गठन गरेका उनी संस्कृत क्याम्पसका प्राध्यापक अम्बिका शर्मा, भीम रानाभाटलगाय जम्मा भएर दशैँमा टीकाटालो गर्छन्। मासु, सेल खाँदै दशैँलार्इ उल्लासमय बनाउने तयारीमा छन्।
‘साँच्चै भन्नुपर्दा दशैँ हाम्रो पनि चाड हो। किनभने दशैँ हिन्दुहरुलाई भन्दा बढी हामीलाई लाग्छ’, हनिफ सुनाउँछन्, ‘हाम्रो परिवार मात्र नभएर पूरै मियाँपाटनलार्इ दशैँ लाग्छ। सारा नेपालीको खुसीमा हामी सामेल नहुने कुरै भएन नि।’
१. दशैँ कसको, टीका कस्तो?
२. सेतो टीका निधारमा
प्रकाशित ३१ असोज २०७५, बुधबार | 2018-10-17 13:55:53